Sii Koraysa Xididdada Qotada Dheer ee Gargaarka Wadajirka ah: liiska dib-u-eegista, dhiirigelinta, & ilaha - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Sii Koraysa Xididdada Qotada Dheer ee Gargaarka Wadajirka ah: liistada milicsiga, dhiirigelinta, & ilaha
Bogga ugu weyn/updates/Sii Koraysa Xididdada Qotada Dheer ee Gargaarka Wadajirka ah: liistada milicsiga, dhiirigelinta, & ilaha
"Waxaan Midba midka kale u ilaalinaynaa Ammaan" oo ay qortay Monica Trinidad
In kasta oo aan ka murugaysanahay khasaaraha nagu hareeraysan, haddana waxaan si isku mid ah u helnaa kalsooni adduun si lama filaan ah oo kumanaan ah kumanaan kun oo ah mashruucyo ku saleysan gargaarka, fikradaha, iyo xiriirada. Waxaan aragnay liisas badan oo dhiirrigelin leh oo la wadaagayo saadka ee sida looga jawaabayo COVID19 gargaarka labada dhinac ah; sida derisyada loola xiriiriyo, loo bilaabo barnaamijyada qaybinta cuntada, iyo loo abaabulo shaqo-joojinta kirada.
Waxaan rabnaa inaan ku dhiirrigelino dadka ku cusub abaabulida gargaarka ee ku saleysan abaabulka si aan loo xaddidin fahamkooda fikradda ah sida koritaanka, isu imaatinka, iyo wadaagista miraha deriskaaga. In kasta oo ay tani tahay wax la yaab leh oo qurux badan nafsadeeda, haddana howlaheena gargaarka ee labada dhinac ah si ay macno ugu yeeshaan awooddeeda si loo kordhiyo awooda bulshada iyo joogteynta awoodeeda si ay uga hortagto waxa sida lama huraanka ah uga hor imaan kara, dadaalkeenna wuxuu u baahan yahay xididdo adag. Waxaan ubaahanahay inaan isqunno midba midka kale oo aan si qoto dheer ugu xirno koritaanka jir ee yimid dhibaatadan kahor iyo himilooyinka adduunka ee aan ku sii kordheyno. Waxaan ubaahanahay inaan horumarino xididadaan si ula kac ah oo feejignaan iyo daryeel leh.
Maqaalkan, waxaan wadaagnaa fikradaha, dhiirrigelinta, iyo kheyraadka si aan u qeexno dadaalkeenna hadda socda ee ka baxsan dhibaatada COVID19 annagoo kobcinayna fahamka qoto dheer ee macnaha ay u leedahay shaqadan inay si qoto dheer ugu xididho ciidda gargaarka bey'adda ah.
Haddii aad hayso wax aad jeceshahay inaad ku aragto liistada kheyraadkan, nagula soo xiriir emaylka at [emailka waa la ilaaliyay].
Dhawr fikradood oo ku saabsan micnaha kaalmada labada dhinac ay ka dhigan tahay macnaha guud ee shaqadeena dib u xoreynta:
Gargaarka iswada waa qaab dabiici ah oo aan uga jawaabno qalalaasaha iyo qeyb ka mid ah xaaladdeena dabiiciga ah ee bini aadamka, laakiin taariikh dheer oo gumeysi iyo caasinimo ayaa si ula kac ah noogu yeeraysay awooddeena aan maalin walba isula daryeeli karno. Waxaan qabnaa shaqo badan oo adag oo aan qabanno oo ah sidii aan nafteenna u qurxin lahayn oo aan uga takhalusi lahayn cunsuriyadda, kalasooca, waddaniyad, cunsuriyadda, iyo transphobia Taasi waxay naga qaybisay rabitaankeena dabiiciga ah ee ah inaan is daryeelno midba midka kale.
Gargaarka isweydaarsiga waa inuu ahaadaa fal iska caabin ah. Awoodayada aan is daryeelno midba midka kale wuxuu khatar ku yahay baahiyaha nidaamyada ugu sarreeya ee ku tiirsanaanta jiritaankeeda. Waa hal shay inaad deriskaaga ka caawiso inuu muddo gaaban ku saleeyo. Waa mid kale oo la abuuro laguna difaaco adduunyo ku saleysan mabda 'this. Sida tusaalooyin badan oo taariikhi ah ay caddeeyeen, mashruucyada gargaarka wadaagga ah ee awoodda leh ayaa ugu dambayn sababi kara ama iskaashi ka dhex abuuri kara kuwa doonaya inay gacanta ku hayaan; taas oo ay ka mid yihiin Gobolka, maal-gashadayaasha, iyo dhismaha warshadeed ee aan macaash doonka ahayn. Dhibaatada COVID19, waxaan sidoo kale daawanaynaa siyaasiyiinta iyo waxqabadka guud ee la wareegaya ereyga 'iskaashi' iyadoo aan la xusin sida ay gacan uga geystaan ​​nidaam muhiim u ah inaan difaacno dhaqankeeda. Kuwa awooda haya maadaama aysan lahayn awood ay iskaga ilaashadaan naftooda. Laakiin inta lagu jiro waqtigan, kaliya uma jeedno inaan dhisno bulshada, laakiin inaan dhisno bulsho ku jihaysan ka soo horjeedka nidaamyada awoodda ee inaga dambeysa markii ay dib u soo ceshadaan.
Gargaarka isweydaarsiga ma aha faash cusub, kulligeenna waxaan haysannaa waxyaabo badan oo aan wax kaga baranno bulshooyinka muddada fog dhibaataysan Kuwaas oo inta badan khibrad nololeed ka badan leh xagga fikradda ficil ahaan marka loo eego deganeyaasha; waa sida ay bulshooyinkaasi uga badbaadeen boqolaal sano oo gumeysiga. Waxaa si cajiib ah loo marin-habaabiyay in la isku dayo in la hirgaliyo mashruuc cusub oo gargaar oo cusub oo wadaagga ah ee bulshada dulman iyada oo aan la dhageysanin isla markaana raadineysa in laga barto khibradda iyo xikmadda bulshadaas.
Caawinaada isweydaarsiga way ka duwan tahay sadaqada maxaa yeelay waxay isku dayeysaa in ay dib u dhigto cilaaqaadka hoosaadka waxaan ku nahay caado ka ah inaan fal gal sameyno. Waa geedi socod kala jaad ah iyo noocyo badan oo gacan ka geysanaya xoreynta qof kasta oo ku lug leh. Waa in aan abuurnaa bulshooyin iskood isku abaabuli kara, iskana kaashanaya mashaariicda, isla markaana u dhisi kara qaabab kale si toos ah. Caawinaada isweydaarsiga waxay dadka u furaysaa wadiiqooyin dadka si ay uga qeybqaataan micno, kaqeybgal dhab ah xitaa hadii ay helayaan kaalmo Dib-u-dhiska maamulkan ayaa ah mid adag. Waxay nooga baahan tahay inaan noqonno kuwa nugul oo aan wax ka ogaano sida aan ugu dhowaanno shaqadeena. Waxay u baahan tahay dhisid kalsooni.
Kuma filna kaliya in la yiraahdo koox waa koox si siman u abaabulan, oo gargaar ku dhisan wadaagga ah. Waa inaan waqti iyo tamar qaadanaa si aan u horumarinno mabaadi'dayada, wax ka bartaan oo dhaleeceeyaan waxa ay uga jeedaan ficil ahaan, la wadaagaan kuwa ku cusub, oo aan u dhisno aragti wadajir ah adduunka aan abuurayno. Gargaarka is-dhexgalka, cimilada, iyo wadajirka waa fikradaha aan la soo koobi karin ee ay adkaan karto in la falgalo; inta badan ma hayno tusaalayaal badan oo gacanta looga soo qaato, waxayna umuuqan karaan bulsho kasta. Mabda 'ahaan iyo dhisidda aragtida way adkaan kartaa in ahmiyadaha la siiyo mudnaanta maxaa yeelay waxay dareemeysaa inaad ka ganacsato tamar kaa soo bixi laheyd haddii kale lagu dabooli karo baahida dadka. Laakiin tani waa shaqo muhiim u ah isbarbar dhigga waxa aan ku wacdinno iyo waxa aan dhismaynay runtii.
Waa inaan qorshaynaynaa inaan sii wadno shaqadeena gargaarka wadaagga ah muddada dheer. Bulshodeena ayaa u baahnaan doonta muddo aad u dheer kadib masiibadaani, iyo shaqooyinka ugu muhiimsan ee aan qabanay wali waa mid wali socda. Macno leh, bulshada xididdu waxay qaadan kartaa waqti iyo dulqaad si loo horumariyo aaminaadda iyo la xisaabtanka lagama maarmaanka u ah. Waa inaan abuurnaa dhaqano waaritaan iyo iskaa ah iyo daryeel wada jir ah oo aan wareejinno doorarka iyo mas'uuliyadaha markay suurta gasho si aan isku xirno oo aan u wada baxno midba midka kale.
Dhowr fikradood oo dhiirrigelin ah waxaan maqleynaa kooxo fulinaya mashruucyadooda cusub iyo bulshooyinka:
Aasaasidda qodobbada midnimada / mabaadi'da hagidda ee kooxda iyo u qabashada shirar isbarasho isbarasho ah tabaruceyaasha cusub si looga wada hadlo iyo waxa ay rabaan inay u ekaadaan waxqabadka. Dejinta shirar toos ah oo toos ah iyo shabakado loogu talagay baloogyada deriska si loo sahmiyo fikradaha gargaarka labada dhinac ah, cimilada, iyo wadajirka. Qabashada kooxaha akhriska, marti-gelinta dadka khibradda u leh go'aan samaynta, goynta dhibaatooyinka qaab-dhismeedka guud iyo caadooyinka, ka-fikirka adduunka ee bulsho ay bulsho rabto inay abuurto iyo khataraha ku cusub dunida cusub.
Dhisidda dhaqanka tusaale ahaan iyada oo la bilaabayo kulamada: Baadhitaanka kartida, wadahadalada waqtiga loo qabtay ee ku saabsan sida ay dadku u dareemayaan wax dhaqdhaqaaq awoodeed, waxa ay horseed u tahay maskaxda si looga fiirsado waxa ay daallan tahay dadka iyo sida ay ula qabsanayaan, waxay dardar gelineysaa sahaminta waxa isku xira dadka ay ku faraxsan yihiin, Waxyaabaha ay garteen wiiggaas, waxa iyaga kor ugu qaadaya.
Uruurinta lacagaha markay suurtagal tahay si loo iibsado kaabayaasha bulshada.
Dhisidda gobalada iyo aragtida adduunkeena cusub iyadoo la wadaagayo farshaxanka iyo dacaayadaha goobaha caamka ah: Banner wuxuu ku dhacayaa xaafadaha, go'yaal lagu dhejiyay si loo muujiyo kuwa kirada ah, calaamadaha khiyaano ah ayaa lagu sudhay daaqadaha dadka iyo tiirarka taleefanka, muraayadaha sawirka, hoos udhaca qeylada gawaarida.
Beddelka ah qaadashada shaqada ee helitaanka dariiqooyin tabaruceyaal cusub ay geli karaan markay weydiiyaan “Sideen u caawin karaa?”, Iyagoo ku dhiirigelinaya horumarinta is-xukunkooda iyagoo weydiinaya “Sidee ayaad u caawisaan? Maxay yihiin xirfadahaaga iyo xiisahaaga? ” (Zine this on aqoonsashada xirfadaha sidoo kale waa ku anfacaya.)
Kheyraadka qaar ee adiga iyo bulshadaada ka caawin kara sameynta xididdadaada wadaagga ah:
Maxay tahay caawimaadda labada dhinac:
Submedia's: Waa maxay Gargaarka Labaad? (video)
Peter Kropotkin's Mutual Aid: Xaqiiqooyin Horumarineed (buug)
Guutada weyn ee Albaabka: Waa maxay Gargaarka Mutual? (fiidiyo, qeexitaanno, iyo kheyraad)
Maxaan uga jeednaa 'caawinaad'? (warqad-bixin)
Waa maxay Kaalmadu? (video)
Waxaan nahay Qorshe C cutub Is-waxbarashadda ah: WTF waa Gargaar Labaad? (ilo)
Xarunta Highlander: Taariikhda iyo Mabaadi'da Gargaarka Mutual (webinar)
Gargaarka Wadajirka ah: Dhisidda Wadajirka Inta lagu jiro Xiisaddan iyo Tan Dambe (buug)
Istaraatiijiyadda Caawinaada Labada Dhinac (video)
Tusaalooyinka mashaariicda gargaarka wadaagga ah ee taariikhda:
Waxyaabaha Kale ee Shaqada Oakland: Casharrada ka yimaada Buufiska Era Mutual Aid (maqaal)
8 Barnaamijyada Xisbiga Madoow ee 'Black Panther' ee ka awood badnaa barnaamijyada Dowladda Federaalka (article)
Awoodda Laba Jihaarka ah Ka dibna Haddeer: Laga soo bilaabo Iroquois illaa Iskaashiga Jackson (maqaal)
Jannada lagu dhisay Naarta (buugga)
Dishibiliinka Gargaarka Labada Dhinac (article)
Aqrinta Su'aalaha Akhriska Dean Spade's Queer iyo Kaalmada Trans Mutual Aid ee Badbaada iyo Mobilis Class (barista manhajka)
COVID-19, Kheyraadka Gumaysiga, iyo iska caabinta asaliga ah (maqaal)
Casharro laga bartay abaabulka mashaariicda gargaarka wadaagga:
Casharadii Gargaarka Musiibada ee Cilmiga Gargaarka. (ziin)
Fur daaqad la tijaabiyey: Casharro la Baran Karo Abaabulka ka Dib Duufaanta Harvey kadib (ziin)
Fur daaqad la tijaabiyey: Tixraacyo Ka jawaabaya Hurricane Harvey (ziin)
Daaqad Lagu Furay Furan III: Milicsiga Labadii Sano ee Harvey Work Work (ziin)
Kheyraadka lagu dhisayo bulshada iyo kooxaha:
Ururka 'Netlab's Organisation for Justice' Dhibaatooyinka Amidst (waraaqaha shaqada iyo aaladaha kale)
Shaxda Dhaqanka Ururka (jadwalka iyo tixraacyada)
Tayada hogaaminta ee taageeraya wada shaqeynta iyo iskaashiga (jadwalka)
Jadwalka Aqoonsiga Barnaamijyada Wax Dhiska (warqad-shaqeed)
Kooxo Hogaaminaya Khadka Tooska ah (eBook)
Mabaadi'da hagaya shaqadeenna:
Mabaadiida Jemez ee Abaabulka Dimuqraadiga
Mabaadi'da Muhiimka ah ee Jiilka Dhaqdhaqaaqa ee Soo-kabashada Kaliya
Mabaadi'da Ku Saabsan Jawaabta Dhibaatooyinka Loo Wada Joogo Oo Loo Heli Karo
Principios de Centros de Apoyo Mutuo iyo Puerto Rico
Mabaadi'da Hanuuninta Musiibada ee Musiibada
2021-04-28T17:41:43-04:00April 23rd, 2020|updates|
La wadaag Story Tani, Dooro Your Platform!
Soo bandhigida Qalabka Relief Toolkit, oo ah goob isku xidha masiibooyinka
Kairos: Gargaar Is-kaashato oo Ka Baxaya Boqortooyada
Ku soo dhowow Xilligii Duufaanta (Juun 2021) - Warbixin Ka Soo Laabashada West Street
Mustaqbalku hadda waa: Isdulsaar Musiibo Joogto ah iyo Gargaar Is-dhaafsi ah Istaraatiijiyadda Badbaadinta
Si ku-meel-gaadh ah Dib-ugu-qaybin ku-Meelgaar ah
Marka aynaan ka jawaabin masiibooyinka, waxaan nahay b
Gargaarka Mutual Aid Musiibada ayaa aad ugu faraxsan in lagu dhawaaqo
Operation Solidarity waa shabakad fowdo ah w
Kaalmada dhirta sida #MutualAid iyo #Care Care in Uk
Heerkulka qaboojinta ayaa la filayaa usbuucan ac
Ku celcelinta #fayoobaanta jiilaalka waa muhiim xitaa marka
Ma waxaad tahay koox #mutualaid ah oo caawinaysa bulshadaada
U yeerida xulafada #gulfcoast #gulfsouth. Haddii aad leedahay